Ibiza - यात्रा समाचार | यात्रा समाचार
इलिजा बालेरिक द्वीपसमूहको पाँचवटा टापु मध्ये एक हो जुन प्रति वर्ष धेरै पर्यटकहरू लिन्छन्। र कमको लागि होईन: यसको क्रिस्टलीय समुद्री किनारहरू, यसको रात्रि जीवन, र यसले यसको आगन्तुकहरूलाई प्रदान गर्ने विभिन्न प्रकारका गतिविधिहरू निस्सन्देह धेरै आकर्षक छन्।। थप रूपमा, मौसम वर्षभरि हल्का रहन्छ, यसको मतलब यो हो कि, जाडोमा अलि अलि जोगिनको लागि आवश्यक छ, तपाईं यसको सडकहरूमा हिंड्न चाहानुहुन्छ।
जो कोही पनि यो भव्य स्थानमा जान चाहान्छन् उसले एउटा प्रमोदवन भेट्टाउनेछ, ऊ लगभग सपनाबाट टाढा भएको जस्तो। त्यहाँ विश्वभरि अद्भुत कुनाहरू छन्, तर इबिजा एक भाग्यशाली टापु हो, पानीले क्यारेबियन समुद्री इलाकामा सुन्दरता र जैविक विविधतामा प्रतिस्पर्धा गर्दछ।
यसमा हामीले जोड्नै पर्छ la स्वादिष्ट घर बनाएको खाना जुन विभिन्न बार र रेस्टुरेन्टहरूमा तयार गरिन्छ TripAdvisor प्रयोगकर्ताहरु द्वारा अत्यधिक मूल्यवान छ। Ibizan लसुन सूप वा परम्परागत किसान सॉस, पछि विशेष गरी क्रिसमस जस्तै विशेष उत्सवहरु मा तैयार पछि बनाउन को लागी संकोच नगर्नुहोस्।
त्यसोभए, तपाई इबिजा भ्रमण गर्न के प्रतिक्षा गर्दै हुनुहुन्छ? यहाँ तपाईं सबै जानकारीहरू फेला पार्न सक्षम हुनुहुनेछ ताकि तपाईंसँग एउटा अविस्मरणीय यात्रा छ। यो नछुटाउ।
Ibiza मा के हेर्ने
द्वारा Susana Garcia बनाउँछ 8 महिना .
इबीसा एउटा टापु हो जुन बेलारिक टापुमा पर्दछ र निस्सन्देह सबैभन्दा प्रसिद्ध मध्ये एक हो। हाइलाइटहरू ...
द्वारा मरियम बनाउँछ 1 वर्ष .
बिरलै सहरीकरण गरिएको वातावरणमा प्रकृतिले घेरिएको, काला सलादा अवस्थित छ, एक उत्तम र सबैभन्दा धेरै अवलोकन गरिएको क्षेत्र ...
Cala Xarraca, Ibiza मा आकर्षक कुना
द्वारा मारिएला क्यारिल बनाउँछ 1 वर्ष .
इबीसा एउटा बालेरिक टापु हो जुन युरोपको ठूलो पर्यटन स्थलहरू मध्ये एकका लागि परिचित छ।
सैन एन्टोनियो शहर, स्यान एण्टोनियो Abad वा सन्त एन्टनी डे Portmany को रूप मा पनि चिनिन्छ। Ibiza को यो शहर ...
द्वारा मरियम बनाउँछ3वर्ष .
हामी सबैलाई थाहा छ कि गर्मी छुट्टीको लागि हामीले रिजर्भेसन गर्न जति लामो समय पर्खिरहेका छौं, हामी उनीहरूलाई जति महँगो भेट्छौं ...
द्वारा Susana Garcia बनाउँछ5वर्ष .
इबीसा एउटा टापु हो जुन यसको गर्मी पार्टीहरू, यसको विशाल राती क्लब र युवा रात जीवनको लागि प्रसिद्ध छ, तर यो टापु ...
इलाइजामा काला सालाडा र काला सलादेत
द्वारा समुद्र तट र रिसोर्टहरू बनाउँछ 8 वर्ष .
इबिजा विश्वको सबैभन्दा ठूलो समर गन्तव्य मध्ये एक हो, जहाँ दिन यसको धेरै मध्ये एक बित्छ।
Es Cavallet, Ibiza मा Quintessential समलि .्गी बीच
यद्यपि यो सहमति हुनुपर्दछ कि यो वास्तवमा सबै नगरीका लागि खुला एक नग्न तट हो, सत्य यो हो कि ...
ह्वारको टापु, क्रोएशियाको इबिजा।
द्वारा eTraveling बनाउँछ 10 वर्ष .
'फोर्ब्स' पत्रिकाद्वारा हवाई र बहामास, टापुको साथ, एक सेक्सी द्वीपहरूको रूपमा लिइन्छ ...